Amahemuhemu ukuthi i-GM izokhipha i-Cadillac SUV entsha (i-jeep), ivuselele umphakathi emuva kwawo-90. Kwaphela isikhathi eside abazange baqinisekiswe futhi, ekugcineni, ngo-1999, i-jeep egcwele i-jeep "Cadillac Escalade" yavela. Igama lomoto linencazelo yomlando: igama elithi "escalade" libhekisela ekugubheni udonga lwamaqhawe ngokusetshenziswa kwamakiladi. Akucaci ekupheleni ukuthi le ndlela yokuvimbela imayelana kanjani nemoto enhle kakhulu, kodwa igama elihle le-"Escaleid" elibanjwe ngokungathinteki futhi lathande abathengi.
I-Chevrolet njengesisekelo se-SUV entsha
Isisekelo semoto entsha kwakuyi-Chevrolet GMC Yukon. I-exnior ennobled, ephothiwe ngenxa yobucwebe "obucwebe" obuhle futhi ihlotshiswe imoto ngezingubo zenkampani yenkampani. I-radiator ye-classic grille yamanga yanda kancane, futhi ama-disks amakhulu amasondo ashintsha kakhulu isithombe semoto. Umklamo wangaphakathi wezakhiwo wangaphakathi wachaza i-SUV "kwi-caste ephakeme", futhi ukukhishwa kwekhanda elikhanyayo kuhlanganiswe nezinhlobo ezibizayo zezinkuni kwaqinisa amandla.
Kusukela ohlangothini lwezobuchwepheshe, kukhona ukufaniswa okuphelele namamodeli we-GMC ne-Chevrolet - izimoto zihlomele izinjini ezifanayo nokudluliselwa. Injini ye-petroli ene-V, ene-litre ayisithupha, amandla okuthuthukisa angu-255 amalitha. Nge. Isivinini esikhulu semoto singama-177 km / h. KP - okuzenzekelayo, ezine-esiteji.
Isisindo nemingcele jikelele
Ubude bemoto - 5110 mm;
Ukuphakama - 1890 mm;
Ububanzi - 1960 mm;
Isondo lesisekelo - 2984 mm;
Isisindo somshini ohlonyelwe - 2545 kg;
Amandla kagesi e-petroli - ama-96 amalitha.
NgoSeptemba 2001, i-Cadillac Jeep Escaleid ETX yabonakala futhi yanikezwa emphakathini othintekayo. Imoto ihlukana nokuhlanganiswa okugcwele nomgwaqo ongekho emgwaqeni futhi ayivumelani nayo ngokunethezeka kwempahla yangaphakathi, ngakho-ke, nangokuzihlonipha.
Isici esiyinhloko seloli - i-body-transformer yangempela ene-plastic carbon plastic, efaka amadivaysi okuthutha imishini yezemidlalo.
Ukumisa okwesikhashana kwemoto kuncike, kuhlomelelwe uhlelo olukhethekile "I-Nivomat", okukuvumela ukuba ulinganise umzimba ngokugcwele. Le pipu ifakwe izilawuli ezicindezelayo kumathayi, umsakazo we-satellite XM "Sattelite" kanye nemishini yokudonsa ephumelelayo.
Ngo-2002, i-Cadillac-Jeep Escalade yathuthukiswa. Umklamo omusha wathola ifreyimu ethwala imithwalo nge-spars, evunyelwe ukufaka injini kanye nokudluliselwa nokumiswa. Ukumiswa kwe-Independent ngaphambi kweminye imigoqo yokuhlushwa nokuqina okuqhubekayo okuqhubekayo, nge-multi-link system ekhokhela izinkomba ezihamba phambili nezingezansi.
Ngo-2004, i-Escalade version yenziwa nge-back wheel drive ngaphansi kwe-5.3 litre injini - i-V-shaped Vortex ene-V. Futhi ukuguqula i-"Escaleid AWD" kunikezwe imoto enamandla kakhulu - i-litre ayisithupha "i-Vortex" ene-wheel-wheel engapheli kanye nokwahlukana kwe-inter-axle. Izimoto ezine "eziyisithupha" nethi "eziyisishiyagalombili" zaqala ukudayiswa eYurophu, futhi kamuva eRussia.
I-European version ihlanganisa isikhumba sendawo yangaphakathi, uhlelo lwemoya ye-HVAC, ne-ventilation yokuhlala kanye nokulawulwa kwesimo sezulu ezintathu. Kukhona futhi ama-airbags ayisithupha azungeze umjikelezo, i-electropackage egcwele, isistimu enamandla ye-DVD yomsindo, amasondo ama-inch angu-20 amasentimitha.
Ngo-2002, inguqulo ekhulisiwe ye-Escalade ESV yadalwa ku-GM plant eSilao. Imoto yayisekelwe esiteji "Chevrolet Suburban XL".
Lo modeli omusha wathola umzila ongu-wheel-wheel unomphela, injini engama-litre ayisithupha kuhlangene nokudluliswa okuzenzakalelayo kwejubane ezine.
Imishini eyisisekelo ihlanganisa anti-tow, ingxowa yangaphakathi, ama-airbags amane, i-BOSE audio, i-navigation, umsakazo we-satellite, ishintshi esithandathu-diski. Isethi ephelele yengeziwe yisikrini esisebenzayo, i-electropackage ephelele. Isethi esiphezulu sisetshenziswe kusukela ngo-2006.
Engxenyeni yokuqala ka-2007, ukuthengisa kwaqala eYurophu ngesizukulwane esisha se "Escalade", ehlanjululwe ngokwengeziwe ngesitayela, ukusebenza okuthuthukisiwe kanye nefomu eliphelele. Imishini yonyaka ka-2007 oyimodeli yahlukaniswa yizinto ezihlukahlukene: zaziyi-pictops ze-EXT kanye nezinhlobonhlobo ezinezizinda ezisekelwe ngamaphesenti angama-356 cm.
Ukuhlanganiswa "Escalade" ngo-2007 kwakuyi-100%, kodwa kwakukhona ilungelo elithile kulo lonke uhlobo lweMG.
I-chassis, umzimba, ifreyimu ene-spars kanye nokudluliselwa, kwakungakaze kusetshenziswe ngaphambilini ku-Escalade yangaphambilini. Konke ndawonye kuye kwandisa kakhulu izinga lokududuza imoto nokuphathwa kwalo emigwaqweni emihle.
Ukumiswa kwangaphambili kuhlonyelwe ukukhishwa kwe-shock absorbers ngokuzenzakalelayo ukufunda i-microrelief yesikhumba. Umzimba onama-57-degree tilt we-windshield, uhlinzeka kakhulu kakhulu ekuphikeleni kwe-SUV ekuhambeni kwe-counter.
Umklamo wangaphandle owenziwe wangaphandle womzimba uhlehlisiwe kakhulu, unesidingo futhi unamandla. "I-Cadillac Jeep Escalade" ithole ukubukeka okuphelele - imoto ayikwazi ukudideka nanoma yimuphi omunye.
I-radiator ye-classic "Cadillac" enezimbobo ezinkulu, ihlanganisa izibani zokuqala ze-xenon. Ingemuva yemoto ivumelana ngokuvumelana nesitayela esingaphandle.
Uma kuqhathaniswa nabangaphambi kwayo, imodeli ye-Cadillac jeep (i-Escalade 2007 entsha) inezinhlelo zokugcina zokuphepha ezingasebenzi futhi ezisebenzayo. I-SUV ifakwe ama-airbags ohlangothini nangaphambili, kanye namakhethini we-pneumatic, ngokushesha akhishwe. Inketho ethi "I-Stable Track" iyasiza kakhulu, ivimbela i-rollover.
Imodeli yeCadillac (jeep 2007) ifakwe injini ye-6.2 litre, i-V enemizimba, isishiyagalombili-cyilinda. I-motor ishlanganiswe yi-automatic speed 6.
Inguqulo ye-Sport Lux
Iphakethe le "Lux" lihlukaniswa ngethimba lamadivaysi akhethekile, njengesiqephu se-plailing nge-automation, izihlalo zangaphambili ezishisayo, i-DVD yomsindo kanye neskrini esikhulu se-LCD.
Kubiza malini i-Cadillac Jeep? Intengo yamamodeli amasha iseduze ne-ruble ezigidi ezine nengxenye. Umkhawulo ophansi wezindleko zemoto emithathu yeminyaka uhluka ezigidini ezimbili eziyizinkulungwane ezimbili namabhiliyoni ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili nesigamu.